China Air Multi- Piston Molding Machine ary mpamatsy | Sofiq
Ny milina dia ampiasaina amin'ny atrikasa fanariana vy, milina famokarana mekanika na tsipika famokarana semi-mekanika ary mety amin'ny famokarana batch ny haben'ny endriny kely ary ny boaty tokana, ny boaty ary ny boaty ambany no hanaovana. fananganana fanerena, varingarina fanerena malalaka, fanamafisana ny tanjaka matanjaka dia tsara amin'ny famolavolana kalitao, fantsona pneumatika tsotra, fifehezana mora sy mora
2. Toetra mampiavaka
A. Ny fampifanarahana fifandraisana marokaretina pneumatika dia raisina hanatsara ny famolavolana ny masinina, tsy misy famoahana solika; tsindry manokana antonony, tsy misy fepetra manokana ho an'ny fasika, fifandraisana mifatotra bebe kokoa (48pcs), mety amin'ny famolavolana sarotra.
B. Ny fihenan'ny tsindry avo lenta, ny fifandraisana marobe dia mametaka ny famolavolana fasika, ary mihetsiketsika amin'ny latabatra miasa (tafasaraka amin'ny rafitra milina, ary ny bika tsy misy fikororohana). Noho izany, vokany hovitrovitra tsara, hamafin'ny haavo ary famolavolana fasika fitoviana mitovy (hatra haben'ny 85 ~ 90, tester karazana henjana B), ny fanjifana fasika dia mety ho 20 ~ 30 mm, ny tahan'ny fampifanarahana dia hatramin'ny 4,2, ary ny faritra avo mitsangana ny hamafin'ny lava-borosy dia mbola mety hahatratra ambonin'ny HB80.
C. Ny masinina dia mandray ny rafitra fametahana micro-vibration amin'ny lohataona, savaivony vatan-tsindrona lehibe, tanjaka avo lenta, voafintina ary na dia ny famolavolana fasika aza, afaka miantoka ny kalitaon'ny fanariana izy io. tsorakazo mampifandray, ny rafitry ny vatan-kazo mifangaro, ny fifehezana ny hafainganam-pandehan'ny solika fanerena, ny fampifanarahana ny bobongolo tsara, mahatsapa ny sary miorim-paka avy amin'ny varingarina roa manainga, ny tehina mampifandray, ary ny vatan-kazo mifono. Fantsona pneumatika tsotra, fandidiana mora sy malefaka, fandidiana mety, ny masinina dia mandray ny rafitra lohataona mihombo feno micro-vibration, tsy misy fepetra ilaina amin'ny fototra.
D. Ny masinina dia mampitombo ny kapoka misy ny varingarina fampifangaroana, mandray rafitra marobe hanatsarana ny tanjaka tsindry ary miaraka amin'izay dia afaka manindry sy mihetsiketsika mifanaraka amin'ny tena filàna izy, ka ny haavon'ny haavo sy ny haavon'ny karazam-pasika (anisan'izany ny karazana famolavolana fasika saro-pantarina) matevina ary mitovy. Fandidiana mora sy mamokatra be.
E. Fanariana fantsom-pasika mandatsaka casting amin'ny rindrina manify, habeany tsara, malamalama amboniny. Famokarana.
Teo aloha: Tsindry fanamafisana tsindry
Manaraka: Milina fanerena fanerena fanamafisam-peo
Famolavolana tavoahangy, Sandbox, Masinina bobongolo, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Famolavolana koveta fanariana, Milina Punch Out,